AH: ဘရာဇီးက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေပေါ် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
စုံစီနဖာများကို ရေးချင်ရာလျှောက်ရေး၊ တင်ချင်ရာလျှောက်တင်နေသော ကျွန်တော့်၏ ကြွက်သိုက်ဂေဟာသို့ တကူးတက ကြွရောက်လာကြသော ဘလော့ဂ်ဂါကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်ကြီးများကို ကျွန်တော် အားနာစွာဖြင့်ပင် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။
ဘရာဇီးက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေပေါ် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီ ဂျနေးဒိုးမှာတော့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ရေပေါ် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးကို ခရစ်စမတ်ရာသီအကြို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာ အမြင် ၈၅ မီတာမြင့်ပါတယ်။ ရီရိုဒီဂျနေဒိုး Rio’s Rodrigo de Freitas Lagoon မှာရှိတဲ့ ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ ရေမီးစုံ အလှပြဖွင့်ပွဲကို ကြည့်ရှု့ဖို့ လူပေါင်း ထောင်ချီပြီး လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာ စုစုပေါင်း ၅၄၂ တန်လေးပြီးတော့ မီလုံးပေါင်း ၃.၃ သန်းကျော် တပ်ဆင်ထားပါသတဲ့။ ဒီနေရာဟာ အခုတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကို ဆွဲဆောင်ရာ အထိက နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ၁ သန်းမကသော လူတွေဟာ ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ မီးအလှတွေကို ကြည့်ရှု့ဖို့ ဘုရင်သုံးပါးနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်မတိုင်ခင် မီးတွေ မဖြုတ်ခင်မှာ လာကြဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂင်းနစ် မှတ်တမ်းမှာတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရစ်စမတ် သစ်ပင်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က YouTube ဗီဒီယိုမှာတော့ ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ အလှအပတွေကို ခံစားနိုင်ကြပါပြီ။
Source : (Link)
Posted by AH at 11/28/2011 10:50:00 PM
Labels: ထူးခြားဆန်းပြား ကမ္ဘာတစ်လွှား
စံပယ်ချို November 29, 2011 at 1:06 AM
မဒမ်ကိုး November 29, 2011 at 9:31 AM
အင်း အင်း ခံစားယုံပဲရတာပါး(
ပိုက်ပိုက်လဲ ချိဘူး တွာလိးု့လဲရဘူးလေ
မောင်မောင် December 2, 2011 at 1:13 AM
aww , so nice , thanksalot ko aunghtut .
Judge your success by what you had to give up in order to achieve it.
Google Plus မှာ Page အသစ်စမ်းထားတာ...
Google+ ကနေတစ်ဆင့် ဖတ်ချင်ရင် ဒီလင့်ကနေသွားနိုင်ပါတယ်
Facebook မှာ ဖတ်လို့ရအောင် Like လို့ရပါတယ်
လမ်းကြုံရင် ၀င် Join သွားကြပါဦး
လျှပ်စစ် ချွေတာဖို့ အတွင်းခံ ထူထူ ၀တ်ကြစို့
အမှတ်တရ Keppel’ Nantong
သံနှင့် အပ်ပေါင်း ၄၇ ချောင်းကို ခြေထောက်ထဲမှ ခွဲထု...
ဗေဒင် နက္ခတ်နဲ့မှ အလုပ်ခန့်မယ့် တရုတ်က ကုမ္ပဏီတွေ
ဂျပန်က ကန်ဆိုင်း နိုင်ငံတစ်ကာလေဆိပ်
လျှောက်ကြဦးမလား တရုတ်က ရင်ထိတ်သည်းဖို မှန်တံတား
Death of ‘thank you’
ကျွန်တော်နှင့် ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးစများ ၂
ကျွန်တော်နှင့် ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးစများ ၁
ပါကစ္စတန် ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျမှာ ပိတ်ပင်မယ့် စကားလုံးတွေ
ကျွန်တော်နှင့် ဥစ္စာစောင့် တစ်ကယ်ရှိတာလား (၂)
ကျွန်တော်နှင့် ဥစ္စာစောင့် တစ်ကယ်ရှိတာလား
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖိ...
တရုတ်က ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံး ကျောင်းတက်ချိန်
နီတာ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမှ မပါဘူး
လေယာဉ်ပျံ မပေါ်ခင်က တီထွင်မှု့များ
အိုင်ဖုန်းကို မုန်းတဲ့ ခွေးကလေး ကိုကို
သီချင်းရေးတာ ၀ါသနာထုံတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတကြီး
ဟွန်ဒါရဲ့ အာစီမို စက်ရုပ် အသစ်
ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ Sea Training (အပိုင်း ၄)
တရုတ်ဘိုးဘိုး ဘွားဘွားတွေရဲ့ လေဒီဂါဂါ
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ရင် သုံးဖို့ လှေဆောက်နေတဲ့ တရုတ်
တောင်ကိုရီးယားမှာ ထိပ်ပြောင်ကြီးလို့ ခေါ်သူများကို ...
ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ Sea Training (အပိုင်း ၃)
အိတ်ဖိုး အပိုကြေးမပေးနိုင်လို့ လေဆိပ်မှာ ၈ ညအိပ်ခဲ...
ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ Sea Training (အပိုင်း ၂)
ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ Sea Training (အပိုင်း ၁)
သူ့အရုပ်တွေကို ဖျက်ဆီးလို့ မိန်းမကို သတ်လိုက်တဲ့ေ...
ကျွန်တော်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ အမှတ်တရများ ၁
အာခိမိဒိ သို့ ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ ပညာရှင်
တစ်ပတ်အတွင်း လူဖတ်အများဆုံး ပိုစ့် ၁၀ခု
တစ်ရွာလုံး ထီပေါက်တာ တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်
စပိန်နိုင်ငံ၊ Sodeto လို့ ခေါ်တဲ့ ရွာကလေးမှာတော့ မက်ဒရစ်မြို့ကြီးရဲ့ မြောက်ဘက်အစွန်းမှ ရှိတာပါ။ တစ်ရွာလုံးမှာတော့ လူဦးရေ ...
ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ပါရီ (Paris) မှာတော့ ယခုအခါ ပျိုပျိုမေတို့အတွက် သတင်းကောင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မွန်းမံလိုက်ပါပြီ။ ဒီ ဥပဒေကေ...
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ပေါ့ ၆
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ပေါ့ ၁ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ပေါ့ ၂ အကြောင်းကြောင်းကြော...
ကျားတို့သည် အင်္ဂါဂြိုလ်မှလာပြီး မ တို့သည် သောကြာ ဂြိုလ်မှလာကြသည်
Phoenix တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဟာ သူ့အတန်းသားတွေကို အိမ်စာတစ်ပုဒ်ပေးပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထူးခြားတဲ့အချက်က ဒီအိမ်စာကို ...
ဒီတစ်ခါတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘယ်လောက်တန်အထိ မြင်ဖူးလဲ? မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အလှဆုံး ပိုက်ဆံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ A Costa...
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲမှု့ ကျွမ်းကျင်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ သင့် လုပ်င...
တရုတ်က အားကစား အသုံးအဆောင် ကုမ္ပဏီကြီးကို တရားစွဲတော့မယ့် မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်
ဘက်စကတ်ဘော လောကရဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သူ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက အားကစားဝတ်စုံတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နာမည်ကြီး ကု...
စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ ပိုင် ဆိုတာက ၂၂ ကိုတည် ၇ နဲ့စား အဲ့ဒါပိုင်၊ ၃.၁၄၁၅၉ ဆိုပြီးတော့ ကျောင်းတုန်းကတော့ သင်ခဲ့ရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘ...
တူဒေးမြန်မာဆိုတာ ဟိုဟာ.. ဒီဟာ သတင်းတွေမဟုတ်။ ဖုန်းကဒ်သာဖြစ်သည်။ ပူသည်... ထုံးစံအတိုင်း စင်ကျားပေါရောက်လျှင် အတော်ပူသည်။ ပူေ...
ဒူဘိုင်းကို ဆိုင်းမဆင့် ဘုံမဆင့် ရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းက စင်ကာပူမှာ အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ ခရီးမထွက်နိုင်သောကြောင့် ...
လည်ကြပတ်ကြ ဘလော့ဂ်ဂါ ဘ၀
Alarm Vs Alert ….. - This is my new Alarm စောစောမထတတျ မတေ့တျတာတှကေို ဖုနျး Alarm ပေးထား ကိုယျ့ကိုယျကို နှိုးဆျောပေးတဲ့ စနဈလေး ဖုနျးထဲပါလာခဲ့တာ အတျောလေးအဆငျပွပေါတယျ...။ ...
ဓာတျပုံရိုကျခွငျး အနုပညာ - ၂ - အရငျတုနျးကဆို စာတှသေိပျရေးနိုငျတာပဲ ရေးစရာတှခေညျြးပဲ။ ခုမြားတော့ ရေးစရာကရှားပါး ရေးခငျြစိတျကလညျး သိပျမရှိ။ ဖုနျးထဲမှာ digital cleansing လုပျရငျး သိမျးထား...
1July2022 - ဆံပငျ​တှကေို စိတျ​တှေ ​လတေိုငျး တခုခုလုပျတတျတဲ့အကငျြ့က ​ဖြောကျမရဘူး။ ခုလညျး ခရီးသှားကပွနျလာပွီး လုပျခငျြတာ လုပျပဈမိပွနျပွီ။ ပွီးမှ နှ​မြော...၊ Dဝငျ​နတော​...
Nginx to Caddy - အလုပျထဲမှာဖွဈဖွဈ ကိုယျပိုငျဆာဗာမှာပဲဖွဈဖွဈ Apache ကနေ Nginx ပွောငျးသုံးတာ နှဈအတျောကွာခဲ့ပွီ သုံးရတာလညျး အဆငျပွပေါတယျ Webserver အနနေဲ့ ဘာမှထူးပွီးတော...
စိတျဖိစီးမှု လြော့ကစြနေညျး (၁၀)ခကျြ... - ကြှနျတျောတို့ဘဝတလြောကျမှာ စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ တကှမေ့ဟုတျ တကှကွေုံ့ရမညျ့အရာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိတျဖိစီးလာတဲ့အခါ ကနျြးမာရေး၊ စီးပှားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊အိမျထောငျရ...
ရှရေငျအေး လုပျနညျး - နှဈသဈကူး သင်ျကွနျအခြိနျအခါမှာ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ မုနျ့လုပျနညျးလေး ရှယျလိုကျပါဦးမယျ။ ရှရေငျအေး လုပျနညျးထဲကနေ အဓိက မုနျ့လကျဆောငျးဖတျ (cendol) လုပျနညျး ကို ရ...
- C box free လေး Blog ရဲ့ အပျေါ ဆုံး ညာ ဖကျ ဒေါငျ့ မှာ အသဈ ဝငျ တယျ premium c box က ဒျေါ လာ နဲနဲ ပေး ရမယျ ပေး ရခကျ လို့ free လေး စမျးသုံး ထား တယျ ကွုံ ရငျ ...
Kalahari indoor water park ခရီး - မင်ျဂလာပါရှငျ~~~ ၂နှဈလောကျ အိမျတှငျးအောငျးသတ်တဝါကနေ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အပွငျထှကျရတော့ ခလေးတှကေစားတဲ့နရောလညျး အိုကွီးအိုမနဲ့သှားကဲခဲ့ပါတယျ...😁 သှားစရာန...
An Asian Tour Operator
- သီရိမင်ျဂလာအိမျဂဟောအတှကျဖုနျးရှနေညျးလမျး ၁၅ ခကျြ သငျဟာလောကီပညာရပျဆိုငျရာ နက်ခတျဗဒေငျ၊ ဖုနျးရှေ၊ ဝါစတုသြှတ်တရပညာ စသညျဖွငျ့ ယုံကွညျမှုရှိသညျဖွဈစေ မရှိသညျ...
31 Jan 2021 မနကျခငျးကိုသာ ပွနျသှားခှငျ့ရမယျဆိုရငျ - အား​ကောငျး​မောငျးသနျလူငယျ​တှေ ဦး​ဆောငျပွီး CBM ဥက်ကဌကိုယျစားလို့ သူ့ကိုယျသူ သတျမှတျသူကွီး ဦးဝငျး​သျောနဲ့ ဗဟိုဘဏျက စာတတျ​ပတေတျလူနညျးနညျးပါးပါးကို ပွနျ​...
tht [dot] blogspot [dot] com
- * အပွာဖြော့ဖြော့ ဂငျြးဦးထုပျတလုံးရဲ့ နောကျဆုံးညနေ* *(ခြိမျ့ သို့)* ============================ လှယျလှယျမကျြရညျကရြတဲ့ ဩဂတျဈ လ ရဲ့ နခေ့ငျးတခု မှာ ရှာတေ...
COVID 19 နှင့် စပ်မိစပ်ရာများ - COVID 19 နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ အမြင်လေးတွေ ပြောချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကိုယ်တွေမြန်မာပြည်မှာတော့ အလူးအလဲ ခံစားနေရတော့ ဖတ်ရင်း စာရှည်သွားမယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပ...
ကျွန်တော့်ဘ၀ ဇာတ်ခုံ - မောင်မျိုး
ခဈြရသော ပုကြိ - ခဈြရသော ပုကြိ
အညာသားလကျရာ ပဲပွုတျနဲ့ ဟငျးစုံ - ကိုဗဈကာလ အညာသားကိုယျတိုငျ ခကျြစားဖွဈသမြှဟငျးတှထေဲက မှတျတမျးတငျထားမိတဲ့ ဟငျးခှကျလေးတှပေါ...။ ပဲပွုတျ ပဲပွုတျဆီဆမျးနဲ့ငါး‌ခွောကျကျွေ ပဲပွုတျထမငျးကျွေ ...
Burmese taste - Iora
- Happy 2021!လောလောဆယ်မှာ တော့ ကုိုဗစ် ကလည်း ဒုက္ခပေးကောင်းတုန်း တကမ္ဘာလုံးအနှံ့ ၊ အမေရိကန်မှာကလည်း နုိုင်ငံရေး ကမတည်ငြိမ်၊ ဟုိုကဆူ သည်ကဆူနဲ့ လူက စိတ်တွေပိ...
နှုတျဆကျ - ဘာကို စိတျဆိုးမှနျး မသိရပမေယျ့ ကိုယျကပဲ တောငျးပနျလိုကျပါတယျ။ ညီမအတှကျ အစစအရာရာ အဆငျပွပေါစလေို့ပဲ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။ နရေ့ကျတိုငျးမှာ ပြျောရှငျပါစေ။
ရွာရန် ရာနှုန်း ၈၀ - အချစ်မှာလည်း ရေချိန်ရှိတယ်၊ အလွမ်းမှာလည်း ရေချိန်ရှိတယ်၊ နာကျင်မှုမှာလည်း ရေချိန်ရှိပါတယ် ဆိုသော်ငြား... ဖြူနဲ့ အောင့် ကို မီးခိုးခေါင်းတိုင်လေးထဲ အတူတူြ...
- တစ်နေ့မှာ ဟုတ်ပါတယ် ရာသီဥတုတွေ မထင်မှတ်ပဲညို့ကျသွားတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ စကားလုံးတွေ အစရှာမရတဲ့နေ့ ။ " ညီလေး ခဏလိုက်ခဲ့ပါ '' ခပ်တည်တည်ပါပဲ ။ ကျွန...
သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး အခဈြတို့အကွောငျး (၈) - ခဈြရတဲ့သူငယျခငျြးမြားသို့ ဒျေါမယျသနျတို့ ပဲပွုတျရောငျးတယျလဲဆိုရော ငယျငယျတုနျးကသူငယျခငျြးတှေ မခံစားနိုငျဖွဈကုနျကွရော 👀 သူတို့စိတျထဲ ထမီလေးတိုတိုဝတျ ပဲပွု...
စာအုပျကလေး နှဈအုပျ - ပွီးခဲ့တဲ့ မလေဆနျးရဲ့ ရကျတရကျမှာ စာတိုကျကနေ မွနျမာစာအုပျလေး နှဈအုပျ အိမျကိုရောကျလာတယျ၊ စင်ျကာပူမှာနတေဲ့ အဈမခဈြကနေ ပို့ပေးလိုကျတာ...၊ ဒါမတိုငျခငျ ရကျသတ...
မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ
ဝမ်းနည်းခြင်း မိုးတိမ် - ဝမ်းနည်းခြင်း မိုးတိမ် **************** ဖွင့်ထားသော တံခါးရွက်တို့သည် လေ အတိုးတွင် ပြတင်းဘောင်ကို လာရောက် ရိုက်ခတ်သည်။ ဝန်းကျင်သည် ရုတ်ချည်း မှိုင်းမှု...
ပဲ့ပါးသွားတဲ့ ကဗျာ - ကဗျာ့စာသား လှချင်ရဲ့သားနဲ့။ ဒီလောကကုို ငဲ့ငဲ့ပြီး ကဗျာလေး ပဲ့ပဲ့သွားတာ။ ဒီဘ၀ကုို ငဲ့ငဲ့ပြီး ကဗျာလေး ပဲ့ပဲ့သွားတာ။ ဒီဝါဒကုို ငဲ့ငဲ့ပြီး ကဗျာလေး ပဲ့ပဲ့သွား...
ချစ်ခြင်းသည်သာ တစ်ကမ္ဘာဆိုသော်ငြား - Number of View: 1 “ဘာရယ်… ပြန်ပြောစမ်းပါဦးဝတီ” ခင်မင်းလွင်တစ်ယောက်စိုးရိမ်စိတ်ကြီးစွာအလောတကြီးမေးလိုက်မိ၏။သိမ့်ဝတီကတော့မတုန်မလှုပ်ကျောက်ဆစ်ရုပ်။ “ခင်မင်း…....
အလှနတ်သမီးလေး မလိခ... - ပူတာအိုကနေ ဆယ်မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ ရွာကလေးကနေတစ်ဆင့် စက်လှေစီးပြီး နတ်ကျွန်းဆီ သွားတဲ့ခရီးဟာ မလိခမြစ်ရဲ့ အလှကို ရင်သပ်ရှုမော တွေ့ရတဲ့ ခရီးတစ်ခုပါပဲ။ ကမ်းစပ်ေ...
- *"Cargo Tank Coatings and Corrosion - (၁)"* (လုပ်ငန်းသဘာဝအရ၊ fleet ထဲက၊ သဘေ်ာတွေရဲ့၊ cargo tanks တွေနဲ့၊ ballast tanks တွေ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး သာမက၊ ဆေးသား '...
Modeling (It's been suchalong time) - ကန်ဒီ မော်ဒယ်မထိုင်ပေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြီး ကြာသွားပြီ။ အဓိကအကြောင်းရင်းက ကိုယ်က တကယ့်မော်ဒယ်လည်းမဟုတ်တော့ မနေတတ်မထိုင်တတ်လေ။ အဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပ...
'ဝနျခံခွငျး' - သူမကို နှဈဖကျခြှနျလိငျစိတျရှိသူ ( Bisexual) ဟု ပွောလာလြှငျ မငွငျးနိုငျပေ။ သို့သျော လိငျပိုငျးဆိုငျရာထကျ အသံပိုငျးဆိုငျရာဟု ပွောမှ ပိုမှနျကနျပလေိမျ့မညျ။ ခြ...
Thet Nandar Family
Ancestors Altar - Praise The Ancestors! Praise to my Ancestors! My Father My mother I give praise to my ancestors. I give praise to my guardian angels. I give praise to the ...
သား - ရွှန်းလဲ့တဲ့ အကြည့် ချိုလိုက်တဲ့ အပြုံး လုံးဝိုင်းတဲ့မျက်နှာ နူးညံ့တဲ့ အသား တစ်ချက် တစ်ချက် လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ လက်အလွှဲ တိမ်တွေအပေါ် ခုန်တက်မလားထင်ရတဲ့ ခြေဟန် အ...
obat alami herpes paling ampuh - [image: cara alami obati herpes] *obat alami herpes paling ampuh* - Penyakit Herpes merupakan salah satu jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya ...
လမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး - အဲဒီလမ်းမကြီးက ၂၄ နာရီလုံးလုံး အသုံးတော်ခံနေရတယ်။ တရွေ့ ရွေ့ များများ သွားတာနဲ့ ခပ်ကျဲကျဲ ခပ်မြန်မြန် ပဲ ကွာတယ်။ တိတ်ဆိတ်မှ အိပ်ပျော်မယ့်သူဟာ အဲဒီ လမ်းမကြ...
မန္န - တနှစ် ဆိုတာ ဘာမှ မကြာလိုက်ဘူး ။ အခုလို စိန်ပန်းပြာတွေ ပွင့် နေတဲ့ နွေဦး ရက် တရက် မှာ ၊ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ရှိလှတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်လေး ဆီ...
ဖိနပ်စီးသောခြေထောက်များ - ကျမ မနေ့က sogo သွားတယ်..ရထားစီးတယ်..sunday ဆိုတော့ ရထားက လူကျပ်တယ်ဆိုပါတော့ ။ကျမပေါ်ထိုင်ရင်း ကျမ လူတွေရဲ့ ခြေထောက်ကို သေချာလိုက်ကြည့်မိတယ် ။ ကြည့်တော့ဘာတွေ...
ကိုယ့်ရဲ့နံနက်ခင်း - လှလိုက်တဲ့ နံနက်ခင်း… ဆောင်းဦးဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ မြက်ခင်းတွေလည်း စိမ်းလာကောင်းပါရဲ့။ ဟော.. သစ်တော်ပင်ပေါ်မှာ သစ်တောက်ငှက်လေးတစ်ကောင်ပါလား။ သစ်တောက်ငှက်လား အ...
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဘယ်နိုင်ငံက ပိုလှသလဲ !!! အပိုင်း(၂) - ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဆုံတိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မြန်မာနိုင်ငံဆီ အလည်ပြန်တုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြမိတယ်။ ...
Tin Maung Hlaing
ဧရာဝတီမြစ် - ဧရာဝတီမြစ် အရှည် ၁၃၅၀ -မိုင် ဖြတ်သန်းရာ ဒေသ ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း မြစ်လက်တက်များ တာပိန်မြစ်...
Amazing IT World
Selfie Light - Limited time sale Selfie ရိုက်ရင် မှောင်နေမှာ စိတ်ပူ စရာ မလို တော့ပါဘူး ဘက်ထရီ ၂ လုံး ထည့်ရုံ နဲ့ ဖုံး tablet iPad တွေ မှာ တွဲ သုံး လို့ ရ တယ်နော် Available...
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ၇-၁၄ - ရုပ်ရှင်ထဲမှာ-၇ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထွက်သွားကြတယ် လက်သီးလက်မောင်းတန်းလို့ လွယ်အိတ်များ ခေါင်းစီးများ စိန်ပန်းများ နီစွေးနေသော သွေးများ ပြသခွင့်မရှိတဲ့...
အခွားတဈဘကျက ဘဝ - မတျ (ဝဲဘကျ) နဲ့ တူရှာ (Photo: Rs100ADay.com) ၂၀၁၁ ခုနှဈ နှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာ အိန်ဒိယနိုငျငံက လူငယျကလေး နှဈယောကျဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ပမျြးမြှ ဆငျ...
စာအုပ်များ အသစ်ထွက်ပါပြီ - စာအုပ်များ ထွက်လာပါပြီ by venpunnavamsa
နေ၀သန် ရဲ့ အိုအေစစ်
Justaminute - ၁၈၆၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လပထမဆုံးသုံးရက်လောက်မှာ Gettysburg စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်.။ စတုတ္ထမြောက်ရက်ရဲ့ ညဘက်မှာတော့ မိုးသက်လေပြင်းတွေကျရောက်လာတာကြောင့် လီရဲ့ တပ်ဖွဲ...
မေတ္တာဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ ချစ်ပုံပြင် - ဒီနေ့ ကိုသုတ ရဲ့ Synergy Publication ကနေထုတ်တဲ့ မနိုင်းနိုင်းစနေနဲ့ ပူးတွဲ ရေးသားထားတဲ့ မေတ္တာဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ ချစ်ပုံပြင်ဆိုတ...
စာဖတ်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူး - မနေ့က Reader Channel မှာလာတဲ့ ဆရာကောင်းသန့်ရဲ့.... စာပေဟောပြောပွဲ ကို နားထောင် ဖြစ်ရင်း ဒီပို့စ်လေး ကို ရေးဖို့ ကျွန်မ စိတ်ကူးရပါတယ်... ဆရာကောင်...
ကျွန်မ နေပျော်ခဲ့ပါတယ် မောင် - ကျွန်မ နေပျော်ခဲ့ပါတယ် မောင် ====================== ကမ်းစပ်က လှိုင်းလေးတွေ ဂယက်ထနေချိန်မှာ ရေပြင်တစ်ခုလုံ...
ရုပ်ရှင်များကိုစတင်တင်ပေးပါတော့မည် ကနောင်သားလေးမိတ်ဆွေဟောင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ - 2014 နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တစ်ကားတင်ပေးမယ် ဇာတ်ကားကတော့ အရမ်းကောင်းတယ် လူသိများနေတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ် dawn of the planet of the apes ဒီဇာတ်ကားမှာ လူနဲ...
“ ဆေးပေါင်းခ . . . ” - သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်း လနတ်တော်... ကောက်ဦးပေါ်လို့ မုန့်ဆမ်းလှော်... တိုင်းစွန်ပြည်နားမှာ ထမင်းရှာစားနေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် မုန့်ဆမ်း မမြင်ဖူးတာ ဆယ်...
အသားအရည်လှပဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေထိန်းသိမ်းစို့ - ပုံအားGoogle မှအသုံးပြုပါသည်။ ခုတလော နိုင်ငံရေးစာတွေကလွဲလို့စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာတွေပိုပြီးဖတ်မိနေသလိုသိလာရသမျှလေးတွေကိုပြန်ပြီးတတ်သလေ...
ပျော်ပါစေ ချယ် - ချယ်ဟာ ပန်းတစ်ပွင့်ဆိုရင်တောင် တစ်လောကလုံးကိုဖူးပွင့်ဝေစေမယ့်ပန်းလေး မိုးတစ်စက်ဆိုရင်တောင် ထိသူ့ရင်ကိုအေးစေမယ့်မိုးစက်လေး ကဗျာတစ်ပုဒ်ဆိုရင်တောင် နဘေထပ်တဲ...
ဇီဇဝါပင်လေး ပြောပြတဲ့ မောင့်အကြောင်း ပုံပြင် - ထာဝရပါ မောင်။ မောင်ဟာ ဖြူ့ရဲ့ ထာဝရပါ။ ဖြူဟာ မောင်တန်ဖိုးထားရတဲ့ မောင် မြတ်နိုးရတဲ့ မောင်ချစ်ရတဲ့ အရာတွေ စုပြုံရှိနေတဲ့ လူသားမိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်ရတာ ဖြူ...
Blog day နှင့် အမှတ်တရများ - အားလုံးပဲ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော blog day နေ့ လေးပါ ။ ဒီနေ့ တော့ blog day နှင့် အမှတ်တရ လို့အမည်ပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးအောက် မှာ ကျနော် blog ...
ဘ၀ (၁) - မာယာမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီးတောင် မပြုံးဘူး အဆင်မပြေခြင်း တစွန်းတစ က မျက်ဝန်းဖျားမှာ တွဲသီတယ် ။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ၀န်းကျင် ငိုချင်းတချို့တ၀က် နဲ့ နှလုံ...
ဆယ့်ကိုးဂျူလိုင် - မျက်ဝန်းကိုမှိတ် အေး အရိပ်၌ ချွေးသိပ်ပါဦး ပန်းကုံးပန်းဆိုင် အခိုင်ခိုင်နှင့် သွန်းဖြိုင်ကာဖြိုး ထီးဖြူမိုး၍ တိမ်ခိုးဦးခိုက် သူလည်းရှိုက်၏ မှောင်မိုက်လှသည့်...
မောင် - မောင် မသိပဲ မောင်လို့ နာမ်စားလေး ခေါ်မိတဲ့အတွက် စိတ်ဆိုးချင်လဲ စိတ်ဆိုးတော့ မောင် မောင့်ကို မောင်လို့ ခေါ်ခွင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟာ ကျွန်မဘ၀မှာ အပျော်ရွှင်မ...
Hello 2014 - မင်္ဂလာပါ... ဘလော့နဲ့ဝေးသွားတာ ၁နှစ်လောက်ကြာသွားပါပြီ။ အားလုံးလဲမေ့နေလောက်ပါပေါ့နော်.... ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်မှာ ဘလော့မှာခင်ခဲ့တဲ့ ဆုံခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမ...
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း - ၃၄ - ဒီတစ်ခါတော့ အပြင်မှာ စားဖြစ်ရင် အမြဲမှာနေကျ ဟင်းအတွဲကို အိမ်မှာဘဲ ချက်စားဖြစ်တယ်။ ဟင်းအကြောင်း မရေးခင် အလုပ်ထဲက အကြောင်းရေးအုန်းမယ်နော်။ ဟင်းချက်နည်းက လြွဲ...
မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....
ကျွန်ုပ်နင့်အသက်ငါ့ပေး ဆရာကြီးညိမ်းနိုင် နှင့် ဒေါ်လာ၁၁ဘီလျံပျောက်ဆုံးမှုကြီး - တစ်နေ့သ၌ကျွန်ုပ် နင့်အသက်ငါ့ပေးဆရာကြီးညိမ်းနိုင်သည် မနက်မိုးလင်း၍မှ တစ်ထွာသော ဝမ်းအတွင်း သို့ ဖြည့်တင်းစရာ တစ်စုံးတစ်ရာလည်းမရှိသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်အား ပုံမ...
ပိတောက်ရဲ့သစ္စာကို ကြည်ညိုနေတဲ့ကောင် - ပိတောက်ရဲ့သစ္စာကို ကြည်ညိုနေတဲ့ကောင် များလွန်းတဲ့ မသေချာမှုတွေကြား သေချာမှုတစ်ခုက တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီ သင်္ကြန် ………… တဲ့။ တစ်နှစ်ကို တစ်ခါရောက် အ၀ါ...
အိမ်လွမ်းစိတ် - "" အိမ်လွမ်းစိတ် "" အိမ်လွမ်းစိတ်နဲ့တိုက်စားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေလည်း နှစ်ချို့ ခဲ့ပြီး။ အမေ........ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ရှနေတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးမှာ အလွမ်းတွေ ချ...
ကမ္ဘာ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းဆုံး သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း - အမေရိကန်သမ္မတတွေနေထိုင်တဲ့ အိမ်ဖြူတော်၊ ပြင်သစ်သမ္မတတွေရဲ့အဲလစ်စီးနန်းတော်၊ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး အဲလစ်စဘတ်စံမြန်းတဲ့ ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကြီးတို့ရဲ့ ခန်းနားထည်ဝါမ...
အစွန့်ပစ်ခံသူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္ထုပတ္တိ - အစွန့်ပစ်ခံသူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္ထုပတ္တိ ကျွန်တော့မှာမွေးချင်းလေးယောက်ရှိတယ်.. ကွန်တော့အထက်မှာအကိုအကြီးတစ်ယောက်အောက်မှာညီတစ်ယောက်ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ကျွန်တော်တိ...
!...* ဆောင်းနှင်းရွက် တေးခတ်သံ *...!
အိုင်ဖုန်း ဖိုက် အလှူခံပါတယ် - အိုင်ဖုန်း .. အိုင်ဖုန်း ... တော်တော် အလုပ်ရှုပ် ၊ စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်း တဲ့ ဒီအိုင်ဖုန်း .. ပြောရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ် ကျော်ကနေ စပြောရမယ် .. သုံးနေက...
ပြည့်ကံကျွေးမှသည် - အခြေံခံလူတန်းစား၊ ဆင်းရဲသား၊ လူလတ်တန်းစား၊ ချမ်းသာသူများ စသောလူတန်းစားစုံ အလွှာစုံမှ ဖြစ် တည်မှု ဖြစ်လာပါသော ပြည့်တန်ဆာ၊ ပြည့်ကံကျွေး ဝဋ်ကြွေးရှင်တွေ အကြေ...
၀ဲကြောင့်ပြောင်းရသော အိမ်ကလေး - မင်္ဂလာပါ ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်နှအပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်အလုပ်များပြီး အွန်လိုင်းသို့ အချိန်မှန်မှန်မတက်နိုင်သောကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ အိမ်များသို့ အရောက်နည်းေ...
မင်းသိပါစေ - နာရီသံတစ်ချက်ချက်နဲ့ ကုန်လွန်သွားတိုင်း မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အသိက ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာရင်း မျှော်လင့်ချက်တွေတိုးလာခဲ့ပေါ့ အချိန်တွေသာတာဝန်ကျေရင်...
Kp3နည်းပညာ၊၄၇၈၊ဘလော့CommentsFormကိုအလယ်မှာထားနည်း - အလုပ်တွေအ၇မ်းများနေလို့နည်းပညာသစ်လေးတွေမျှဝေချင်ပေမယ့်အချိန်မ၇နိုင်တာကိုနားလည်ပေးကြတဲ့ကျနော်ဘလော့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းအ၇င် ဆုံးပြောချင်ပါတယ်...
အခန်း ၁၄ - Maintenance and docking - *Maintenance and Docking* ၁၄.၁ Construction materials for ships ၁၄.၁.၁ Wood ၁၄.၁.၂ Steel ၁၄.၁.၃ Aluminium and its alloys ၁၄.၁.၄ Copper and its alloys ၁၄.၁....
It's all about ART
မြည့်မြည့်နွမ်းနွမ်း - မြည့်နွမ်း ငါ့မြည့်မြည့်နွမ်းနွမ်း တစ်ညနေလုံး ငါဟာကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းပေါ်ငေးနေတယ် တော်တော်ကြာကြာ မှောင်တော့ ကလေးနဲ့ခွေးတွေအမှိုက်ပုံဆီ အုပ်အော်သောင်းနင်...
Quu Te Kitchen
ကျွန်မ ဘ၀၏ အမှတ်တရ နေရာလေးတစ်ခု
Nine Nine SaNay
ဟော့ဒါကလည်း မြန်မာ လင့်များ စုစည်းပေးတဲ့နေရာလေးပါ
AH - ကော်ပီရိုက်တော့မဟုတ်ဘူး ယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ AH ဆိုတဲ့ နာမည်လေးထည့်ပေးပါ။. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.